TTSweet: တော်တို့ယောက်ျားတွေရယ် ...
Posted by T T Sweet at 6:32 AM
ဖိုးတုတ် May 12, 2011 at 10:51 PM
ညအိပ်ရာ မဝင်ခင် အိမ်ဦးနတ်ကြီးကို မပျက်မကွက် ကန်တော့ရသေးလား
ဒါမှမဟုတ် လစာထုတ်တဲ့နေ.မှပဲ ကန်တော့သလား .. ခွိခွိ
ခနွဲ May 13, 2011 at 12:38 AM
မယ့်ကိုး May 14, 2011 at 11:13 AM
မယ် ဒီစာလေးကို ခဏခဏလာကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူတွေ ကွန်မန့်ပေးပြီး ထပ်ရယ်ရမလဲလို့ ...Google နှိပ်စက်တာနဲ့ အခုထိ မရယ်ရသေးဘူးပဲး)
T T Sweet May 14, 2011 at 1:39 PM
မယ်ကိုးရေ မနေ့က blogspot က ဒေါင်းနေလို့ အဲဒီပို့စ်လဲ ပျက်သွားတယ်။ ကွန့်မန့်တွေလဲ ပျက်သွားတယ်။ ခုဟာက အသစ်ပြန်တင်ထားတာ။ လည်လည်လာတာ ကျေးဇူးနော်။
ဖိုးတုတ် May 14, 2011 at 11:56 PM
ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဦးဆုံးကွန်မန်.ပျက်သွားတယ်၊
ဘလော့တော်တော်များများဖြစ်တယ်၊ အိုင်ဒီယာအသစ်နဲ. အောက်ပါအတိုင်းပြန်မန်.လိုက်ပါတယ်၊
အိမ်ဦးနတ်ကြီး ရုံးကပြန်လာရင် ဟင်းချက်ခိုင်း၊ အ၀တ်လျော်၊ မီးပူထိုးခိုင်း၊ အနားမပေးနဲ.
ဦးခြိမ့်ရေ စိတ်မဆိုးပါနဲဗျာ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ခံစားနေရလို. အဖော်ရှာတဲ့ သဘောပါ၊
aungthulinn.msu May 16, 2011 at 3:42 AM
တီတီဆွိ မင်္ဂလာပါ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေကြောင်း ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျ သြစီအကြောင်းတွေရေးထားတာလည်းဖတ်ဖြစ်တယ်ဗျ ကိုယ်တကယ်ရောက်နေသလိုခံစားရတယ်ဗျ အခုလိုမျှဝေးပေးလို့ လည်းကျေးဇူးပါ
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် November 17, 2011 at 7:06 AM
း) လူစုံတုန်းပြောလိုက်ဦးမယ်။ ဘယ်သူ့မှပြန်မပြောနဲ့နော်။ ခိခိ